Ebionita - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Ebionisma)
Ny Ebionita dia ireo Kristiana Jiosy tamin'ireo taonjato voalohandohany nisian'ny kristianisma. Amin'izy ireo dia i Jesosy no Mesia nefa lavin'izy ireo ny maha Andriamanitra azy sy ny fiteraham-birijiny azy sady manamafy izy ireo fa tokony hotandremana ny Lalàna sy ny fombam-pivavahana jiosy. Ny Evanjely hebreon'i Matio, manomboka amin'ny toko fahatelo, no ampiasainy. Hajainy i Jakoba rahalahin'i Jesosy (atao hoe Jakoba ilay Marina) nefa laviny i Paoly noho ity apostoly ity mandà ny Lalàna jiosy. Midika fanoloran-tena ho amin'ny fiainana ao anaty fahantrana io anarana Ebionita iantsoana azy ireo io. Ny teny hoe Ebionim dia nampiasain'ny sekta tao Komrano izay nisaraka tamin'ny fahasimban'ny fivavahana tao an-Tempoly.
Maro ny mihevitra fa ny sekta tao Komràno dia tsy iza fa ny Eseniana. Ny ankabeazan'ny zava-pantatra momba ny Ebionita dia avy amin'ny soratr'ireo Rain'ny Fiangonana (na Aban'ny Eglizy) izay nitsikera ny Ebionita ka nanao azy ireo ho mpanaraka finoan-diso. Noho izany dia tombantombana ihany ny zavatra azo lazaina momba ny fikambanany.
Ny mpikaroka sasany dia tsy mampitovy ny Ebionita amin'ny atao hoe Kristiana Jiosy (na Jodeo-kristiana), sahala amin'ny Nazareana (na Nazarena na Nazoreana). Ny mpikaroka hafa anefa, toy ny nataon'ny Rain'ny Fiangonana, dia milaza fa vondron'olona iray ihany ny Ebionita sy ny Nazareana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebionita&oldid=973134"
Voaova farany tamin'ny 20 Aogositra 2019 amin'ny 13:02 ity pejy ity.